1 Ihe E Mere 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Mbụ 12:1-40
Ndị kwadoro ka Devid bụrụ eze (1-40)
12 E nwere ndị bịakwutere Devid na Ziklag+ mgbe ọ na-ezogharị n’ihi Sọl+ nwa Kish. Ha so ná ndị bụ́ dike n’agha. Ha na-esokwa ya aga agha.+ 2 Ha na-eji ụta aga agha. Ha nwekwara ike iji aka nri ma ọ bụ aka ekpe+ gbapụ nkume+ ma ọ bụ jiri ụta gbapụ akụ́. Ha bụ ụmụnne Sọl. Ha si n’ebo Benjamin.+ 3 Ahayiza na Joash, bụ́ ụmụ Shemea onye Gibia,+ bụ ndị isi ha. Ndị ọzọ bụ Jiziel na Pelet bụ́ ụmụ Azmavet,+ Beraka, Jihu onye Anatọt, 4 nakwa Ishmeya onye Gibiọn.+ Ishmeya bụ onyeisi ndị isi iri atọ,+ bụrụkwa dike n’agha. Ndị ọzọkwa bụ Jeremaya, Jahazayel, Johenan, Jozabad onye Gedira, 5 Eluzaị, Jerimọt, Bealaya, Shemaraya, Shefataya onye Harif, 6 nakwa Elkena, Ịs-shaya, Azarel, Joiza, na Jashobiam, ndị si n’agbụrụ Kora.+ 7 Ndị ọzọkwa bụ Joila na Zebadaya, ụmụ Jeroham onye Gidọ. 8 Ụfọdụ ndị ebo Gad gakwuuru Devid n’ebe a rụsiri ike n’ala ịkpa.+ Ha bụ ndị dike n’agha, ndị agha a zụrụ azụ, na ndị aka ochie n’ibu ọta nakwa n’ịma ube. Ihu ha dị ka ihu ọdụm. Ha na-awụkwa ọsọ n’ugwu ka mgbada. 9 Iza bụ onyeisi ha. Obedaya bụ onye nke abụọ, Elayab onye nke atọ, 10 Mishmana onye nke anọ, Jeremaya onye nke ise, 11 Ataị onye nke isii, Iliel onye nke asaa, 12 Johenan onye nke asatọ, Elzebad onye nke itoolu, 13 Jeremaya onye nke iri, Makbanaị onye nke iri na otu. 14 Ndị a si n’ebo Gad,+ bụrụkwa ndị isi ndị agha. Onye na-esighị ike n’ime ha na-emerili otu narị (100) ndị agha, onye kacha ike n’ime ha na-emerilikwa otu puku (1,000) ndị agha.+ 15 Mgbe Osimiri Jọdan tojuru n’ọnụ n’ọnwa mbụ, ndị a gafere ya chụpụ ndị niile bi na ndagwurugwu, chụga ha n’ebe ọwụwa anyanwụ na n’ebe ọdịda anyanwụ. 16 Ụfọdụ ndị si n’ebo Benjamin nakwa n’ebo Juda gakwukwaara Devid ebe ahụ ọ nọ a rụsiri ike.+ 17 Devid pụtakwara ịhụ ha ma sị ha: “Ọ bụrụ na unu bu ihe ọma n’obi bịa ka unu nyere m aka, obi mụ na unu ga-abụ otu. Ma, ọ bụrụ na unu bịara ka unu rara m nye n’aka ndị iro m n’agbanyeghị na aka m dị ọcha, ka Chineke nna nna anyị hà hụ ya ma kpee ikpe mụ na unu.”+ 18 Mmụọ nsọ wee dakwasị Amesaị,+ onyeisi mmadụ iri atọ ahụ, ya asị: “Devid, anyị bụ nke gị. Anyị nọnyekwaara gị, nwa Jesi.+ Udo, udo dịrị gị, udo dịkwara onye na-enyere gị aka,N’ihi na Chineke gị na-enyere gị aka.”+ Devid wee nabata ha, họpụtakwa ha ka ha soro ná ndị isi ndị agha ya. 19 Ụfọdụ n’ime ndị ebo Manase hapụrụ ndị agha Sọl ma gbakwuru Devid mgbe ya na ndị Filistia bịara ịlụso Sọl agha. Ma, Devid enyereghị ndị Filistia aka, n’ihi na mgbe ndị isi ndị Filistia+ gbachara izu, ha gwara ya ka ọ lawa. Ha sịrị: “Ọ bụrụ na o soro anyị, ọ ga-ahapụ anyị, gbakwuru Sọl onyenwe ya. Ihe a ga-atakwa isi anyị.”+ 20 Mgbe ọ gara Ziklag,+ ndị si n’ebo Manase gbakwuru ya bụ: Adna, Jozabad, Jedayel, Maịkel, Jozabad, Elaịhu, na Ziletaị. Ha bụ ndị isi nke otu puku otu puku ndị agha n’ebo Manase.+ 21 Ha nyeere Devid aka ịlụso otu ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ọgụ, n’ihi na ha niile bụ ndị dike obi kara.+ Ha ghọkwara ndị isi ndị agha ya. 22 Ndị mmadụ na-abịa enyere Devid+ aka kwa ụbọchị. Ha nọ na-abịa ruo mgbe ha ghọrọ ìgwè ndị agha há ka ìgwè ndị agha Chineke.+ 23 Ndị a bụ ndị agha ole jikeere ịlụ agha, ndị bịakwutere Devid na Hebrọn+ iji chie ya eze, ka ọ nọchie Sọl otú Jehova kwuru ka e mee.+ 24 Ndị Juda, ndị jikeere ịlụ agha, ndị na-ebu ọta ukwu na ube, dị puku mmadụ isii na narị asatọ (6,800). 25 Ndị Simiọn, ndị dike obi kara, ndị so ná ndị agha, dị puku mmadụ asaa na otu narị (7,100). 26 Ndị Livaị dị puku mmadụ anọ na narị isii (4,600). 27 Jehoyada+ bụ onye ndú ụmụ Erọn,+ puku mmadụ atọ na narị asaa (3,700) sokwa ya. 28 E nwekwara nwa okorobịa bụ́ dike obi kara, aha ya bụ Zedọk,+ nakwa ndị isi iri abụọ na abụọ si n’ezinụlọ ndị nna nna ya. 29 Ndị Benjamin, bụ́ ụmụnne Sọl,+ dị puku mmadụ atọ (3,000). Ọtụtụ n’ime ha nọbu na-eche ụlọ Sọl nche. 30 Ndị Ifrem dị puku mmadụ iri abụọ na narị asatọ (20,800). Ha bụ ndị dike obi kara, ndị a ma ama n’ọnụmara ha dị iche iche. 31 Ndị si n’ọkara ebo Manase dị puku mmadụ iri na asatọ (18,000). Ọ bụ ha ka a họpụtara ịga chie Devid eze. 32 Ndị Ịsaka dị narị ndị isi abụọ (200). Ha ma ihe na-aga n’obodo nakwa ihe ndị Izrel kwesịrị ime. Ọ bụkwa ha na-agwa ụmụnne ha niile ihe ha ga-eme. 33 Ndị Zebulọn, ndị na-aga agha, dị puku iri ise (50,000). Ha na-ebu ụdị ngwá agha niile aga agha. Ha jikwa obi ha niile soro Devid. 34 Ndị Naftalaị dị otu puku (1,000) ndị isi. Puku mmadụ iri atọ na puku asaa (37,000), ndị na-ebu ọta ukwu na ube, sokwa ha. 35 Ndị ebo Dan, ndị na-aga agha, dị puku iri abụọ na asatọ na narị isii (28,600). 36 Ndị nke Asha, ndị na-aga agha, dị puku iri anọ (40,000). 37 Ndị nke si n’ofe nke ọzọ nke Osimiri Jọdan,+ ya bụ, ndị Ruben, ndị Gad, na ndị si n’ọkara ebo Manase, dị otu narị puku ndị agha na puku iri abụọ (120,000). Ha na-ebu ụdị ngwá agha niile. 38 Ndị a niile bụ ndị agha. Ha niile na-eso aga agha. Ha jikwa obi ha niile bịa Hebrọn ka ha chie Devid eze Izrel niile. Ndị ọzọ niile n’Izrel jikwa otu obi chọọ ka e chie Devid eze.+ 39 Ha nọnyekwaara Devid ụbọchị atọ, na-eri, na-aṅụkwa ihe ụmụnne ha bupụtaara ha. 40 Ma ndị bi ha nso ma ndị Ịsaka, ndị Zebulọn, na ndị Naftalaị, ndị si ebe dị anya, ji obere jakị, kamel, nnukwu jakị,* na ehi na-ebute ihe oriri ndị e ji ntụ ọka mee, keeki e ji naanị mkpụrụ fig mee, keeki mkpụrụ vaịn kpọrọ nkụ, mmanya, na mmanụ. Ha kpụtakwara ọtụtụ ehi na atụrụ. Ha wetara ihe ndị a niile n’ihi aṅụrị a na-enwe n’Izrel.
^ Okwu Hibru a sụgharịrị nnukwu jakị n’ebe a pụtara jakị nke nne ịnyịnya na oké jakị mụtara.
1 Ihe E Mere 12